के मृत्युपछि जीवन पाइन्छ?
प्रश्न: के मृत्युपछि जीवन पाइन्छ?
उत्तर: मृत्युपछि पनि कुनै जीवन छ भनि एक विश्वव्यापी प्रश्न बनेको छ। अय्युबले सबैलाई भन्दछ, “स्त्रीबाट जन्मेको मानिस अल्पआयुको र अशान्तिले भरिएको हुन्छ, त्यो फुलझैं फर्कन्छ र ओइलाइहाल्छ। त्यो क्षणिक छायाँ जस्तै हराइहाल्छ, रहँदैन। “...के मानिस मरेपछि ऊ फेरि जिउँछ?” (अय्युब १४:१-२, १४)। अय्युबलाई जस्तै हाँमी सबैजसोलाई यस प्रश्नले चुनौती दिएको हुनसक्छ। वास्तवमा हाम्रो मृत्युपछि के हुनेछ? के हाम्रो जीवन समाप्त हुनेछ? के जीवन एवटा परिक्रामी ढोका हो जसबाट यस संसारमा आफ्नो महनता बढाउनलाई हामी जाने र आउने गर्छौं? के सबै व्यत्किहरु एकै ठाउँमा जान्छन् वा बेग्लाबेग्लै ठाउँमा जान्छन? के स्वर्ग र नर्क वास्तविक ठाउँ हो?
बाइबलले हामीलाई भन्दछ कि, मृत्युपछि जीवनमात्र नभई, अनन्तको जीवन यति भब्यको छ जुन” “...आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका, यी नै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरुका निम्ति तयार पार्नुभएकोछ” (१ कोरन्थी २:९)। येशू ख्रीष्ट, परमेश्वर शरिरमा प्रकट भई संसारमा अनन्त जीवनको उपहार दिन आउनुभयो “तर ऊ त हाम्रा अपराधहरुका निम्ति छड़ियो। हाम्रा अधर्मका निम्ति ऊ पेलियो। हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौं” (यशैया ५३:५)।
येशूले हाम्रा पापको निम्ति क्रूसमा बलिदान दिनुभयो। तीन दिनपछि, उहाँले चिहानबाट बौरी उठी मृत्युबाट माथी बिजय साबित गर्नुभयो। स्वर्गको सिहासनमा जानु भन्दा पहिले गवाहिको लागि हजारौँ मानिसका सामु चालिस दिन सम्म रहनुभयो। रोमी ४:२५ ले भन्दछ “उहाँ हाम्रा अपराधहरुका निम्ति मारिनुभयो, र हामीलाई धर्मी तुल्याउनलाई जीवित पारिनुभयो।”
ख्रीष्टको पुनरूत्थान पूर्ण रुपमा ब्रिस्तान्त गरिएको एक घट्ना हो। पावल प्रेरितले प्रत्येकलाई त्यस घट्नाका दर्शकहरुसँग प्रश्न उठाउनलाई चुनौती दिएका थिए, यस सत्यलाई कसैले पनि विरोद्ध गर्न सकेनन्। ख्रीष्ट पुनरूत्थान विश्वासको मुख्य चट्टान हो। किनभने ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो, हामी पनि, विश्वास गर्न सक्छौँ कि हामी पनि बौरी उठ्नेछौँ। येशू ख्रीष्टको पुनरूत्थान नै मृत्युपछिको जीवन प्रमाण हो। येशू ख्रीष्ट एकमात्र पहिलो फसल हुनुहुन्छ जसको जीवनको पुनरूत्थान फेरी हुनेछ। जसरी शारीरिक मृत्यु एक मानिस आदमबाट आयो जससँग हामी सबै सम्बन्धित छौँ। तर सबै जना जो परमेश्वरको परिवारमा अपनाइएका छन् विश्वासद्वारा ख्रीष्ट येशूमा नयाँ जीवन पाउने छन् (१ कोरिन्थी १५:२०-२२)। जसरी परमेश्वरले येशूको शरीरलाई बौरी उठाउनु भयो, त्यसरीनै हाम्रो शरीरको पनि येशू फेरी आउँदा पुनरूउत्थान हुनेछ (१ कोरिन्थी ६:१४)।
यद्दपि हामी एकदिन पुनरूत्थान भएपनि, सबै स्वर्गमासँगै जान पाउदैनौँ। यस जीवनमा हरेक व्यत्तिले एक चुनाव लिनुपर्छ कि अनन्त जीवन बिताउन कहाँ जाने हो। बाइबलले भन्दछ हाम्रो मृत्यु एक पटक निश्चित छ र त्यसपछि हाम्रो लेखाजोखा लिइनेछ (हिब्रू ९:२७)। जसलाई धर्मी ठहर्याइएको छ उनीहरु स्वर्ग जान्छन् र अविश्वासीहरु अनन्तको संजाय भोग्न नर्कमा पठाइनेछन् (मत्ती २५:४६)।
नर्क, स्वर्ग जस्तो नभएर, वास्तविकमा एक भौतिक र साँचो ठाउँ हो। त्यस ठाऊँमा अधर्मीहरुले कहिल्यै नसकिने परमेश्वरको क्रोध अनन्त सम्म सहनु पर्नेछ। नर्कलाई अतल कुण्ड भनेर वयान गरिएको छ (लुका ८:३१, प्रकाश ९:१), र दियावलस आगो, गन्धकको कुण्ड जहाँ सबै बासीहरुलाई दिन-रात अनन्त सम्म यातना भोग्नेछन् (प्रकाश २०:१०)। नर्कमा सबै रुनेछन् र दाह्रा किट्नेछन् भनेर अति कष्ट र रीसको संकेत दिन्छ (मत्ती१३:४२)।
यस्तो ठाऊँ हो जहाँ “न किरा मर्दछन्, न आगो नै निभ्दछ” (मर्कुस ९:४८)। परमेश्वर अधर्मीको मृत्युको पटक्कै चाहाना गर्नुहुन्न तर ऊहाँ उनीहरु अधर्मीपनबाट फर्केर आउन भनि प्रत्तिक्षा गर्नुहुन्छ जुनबाट उनीहरु जिउन सकुन (इजकिएल ३३:११)। तर उहाँले हामीलाई आफ्नो अधीन रहन कर गर्नुहुन्न। तर यदि हामीले उहाँलाई त्याग्छौँ भने, उहाँले हामीले रोजेको उपाय-परमेश्वरबाट छुट्टिएको जीवन दिन बाध्य हुनुहुनेछ।
यहाँ पृथ्वीमा जीवन यसपछि आउने समय तयारीको एक परीक्षा हो‍। विश्वासीहरुका लागि, मृत्युपछिको जीवन अनन्त परमेश्वरसँग स्वर्गमा बिताउनु हो। अविश्वासीको लागि, मृत्युपछिको जीवन अनन्त आगोमा बिताउनु हो। हामीले कसरी अनन्त जीवन मृत्युपछि पाउन सक्छौँ र अनन्त आगोमा जानुबाट जोगिन सक्छौँ? यसको लागि एकमात्र बाटो छ – येशू ख्रीष्टमा पूर्ण विश्वास र भरोसा गरेर मात्र। येशूले भन्नुभुयो, “पुनरउत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ। अनि जिउने र म माथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिले मर्नेछैन...” (यूहन्ना ११:२५‍-२६)।
अनन्त जीवनको यो सित्तैको उपहार हो। ”जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्छ, त्यससित अनन्त जीवन छ। जसले पुत्रको आज्ञा पालन गर्देँन, त्यसले जीवन देख्नेछैन, तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहिरहन्छ” (यूहन्ना ३:३६)। हामीले म्रृत्युपछि हाम्रो पापको पश्चाताप गर्ने मौका पाउनेछैनौँ। किनकि हाम्रो अन्नत गन्तब्य हामी संसारमा हुँदै प्रभु येशूलाई पाएर वा त्यागेर निर्धारित गर्छौँ। हेर, ग्रहणयोग्य समय अहिले हो, मुक्तिको दिन अहिले हो” (२ कोरिन्थी ६:२)। यदि हामीले येशू ख्रीष्टको मृत्युलाई हामीले परमेश्वरको खिलाफ गरेको पापको ज्यालाको रूपमा ग्रहण गरेमा, हामीलाई यस संसारमा अर्थ पूर्ण जीवनमात्र नभई हाम्रो अनन्तको जीवन पनि येशू ख्रीष्टको चरणमा बित्नेछ।